Fadintseranana-AFE : mora sy haingana nefa azo antoka | NewsMada
Fadintseranana-AFE : mora sy haingana nefa azo antoka
Nankatoavina ny fifanarahana fanamaivanana sy fanafainganana ny fifanakalozana eo amin’ny varotra iraisam-pirenena na “Accord de facilitation d’échanges” (AFE), tapaka ny taona 2013. 81,1 % ny nandany izany, na firenena 133 amin’ireo 163 mpikambana ao amin’ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny varotra, Organisation mondiale du commerce (OMC).
Fanamby ho an’i Madagasikara ny manatanteraka miandalana hatramin’ny 80 % ny fepetra momba ny AFE, mialoha ny taona 2023. Tanjona ny fanamaivanana sy fanafainganana ny fifanakalozana amin’ny varotra, ny avy any ivelany sy izay aondrana. Manana andraikirra lehibe amin’izany hatramin’ny 98 % ny fadintseranana, nitondrana fanazavana ny laminasa momba ny fizorana amin’ny AFE, sy ny anjara andraikitry ny hafa. Na ny fadintseranana aza ny tompon’antoka voalohany, manana anjara mifanandrify aminy ny rehetra, toy ny minisitera isan-tokony : varotra, harena an-kibon’ny tany, sehatra tsy miankina, sns.
Sakana ho an’ny fampandrosoana ny olana misy eto amin’ny famoahana na fampidirana entana : be loatra ny fotoana lany, 17 andro eo ho eo ; maro ny fepetra sy antontan-taratasy takina ary indrindra, be ny vola lany, 596 dolara isaky ny kaontenera. Ny mifanohitra amin’ireo ny vahaolana hirosoana amin’ny AFE : fanafainganana ny asa, fanamorana ny vola mivoaka, fahafantarana mialoha ny tokony hatao. Fehiny, haingana sy mora nefa azo antoka. Manampy ny mpandraharaha izany, ary tokony hisy akony amin’ny vidin-javatra hatrany amin’ny mpanjifa.
Tsy maintsy teknolojia avo lenta
Misy sokajiny telo (A, B, C) ny mandrafitra izany fifanarahana izany, tanterahina araka ny fepetra raisin’ny fadintseranana taorian’ny nankatoavantsika io AFE io, ny 20 jona 2016. Tanterahina ara-potoana, na tanterahina avy amin’ny fanohanana ara-teknika. Mitaky ezaka maro isika eto Madagasikara, eo amin’ny fampitaovana, fanaraha-maso, teknisianina ilaina hiasa ho an’izany. Koa tsy maintsy mampiasa teknolojia avo lenta isika ho fampiharana ny AFE.
Ao, ohatra, ireo seranam-piaramanidina, na eo Ivato aza, tsy manana trano fampangatsiahana fitahirizana hiantohana ireo entana mila izany, toy ny fanafody, vaksiny, sakafo…Ilaina ny “guichet unique”, fandoavam-bola elektronika, anisan’ny fomba fiasa hoenti-miady amin’ny kolikoly. Zava-dehibe navoitry ny ao amin’ny fadintseranana ny fananana toe-tsaina mahomby amin’izay atao, ka hifampitahana ny vokatra azo. Tsy ho an’ny fadintseranana irery izany fa ho an’ny sampandraharaham-panjakana rehetra.
Eco brèves 02/03/2021
Star Toamasina: une nouvelle agence à Tanandava 02/03/2021
Rénovation de l’aéroport de Nosy Be : 65 ménages de Fascène relocalisés à Pont Valiha 02/03/2021